အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မတော်တဆ အချစ်
Posted by တီချမ်း at 11:04 AM
သဇင်ဏီ March 19, 2009 at 11:14 AM
တခါတလေ ကျွန်မတို့တစ်တွေဟာ မလွတ်လပ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကိုချစ်မိတဲ့အခါ အဲလိုချစ်မိတဲ့အတွက် နာကျင်ခံစားကြရတယ်...
တစ်ခုပဲလေ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်မတော်တဆ ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ ကြတာပါ...
အဲဒီစာသားတွေရဲ့ ရိုက်ချက်တွေထိတယ် တီတီရေ...
ဟုတ်ပါတယ်.. လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီလွတ်လပ်မူတွေနဲ့ပါ..
အန်တီချမ်း March 19, 2009 at 11:22 AM
ဟုတ်တယ် မီးရေ တီ က
ကိုသားကြီးကြော်ညာ တဲ့ ဘောစ့်ဘောပင်နဲ့ပဲရေးတာလေ
အဲဒါကြောင့် ဟတ် ထိတာနေမှာ
Phyo Evergreen March 19, 2009 at 12:19 PM
မိုးမမြင်လေမမြင်တော့ ဘာမြင်သလဲ.. ကျွန်တော်လာလည် အချိန်မရှိ ထမင်းသွားစား ရေကဲ့သို့ ပြန်လျှော
nadine March 19, 2009 at 12:24 PM
nadine March 19, 2009 at 12:27 PM
from Accd: Love to
May be love for ever....
အန်တီချမ်း March 19, 2009 at 12:36 PM
နဒင်း ရေ ဘာပြောချင်တာလဲဟ?
တီ က တိန် တုံး
Phyo Maw March 19, 2009 at 1:14 PM
လူမလာ သတင်းမကြားနဲ့ လွတ်ကုန်ပြီ။ ဟင်း ခက်တယ်။
နွေးနေခြည် March 19, 2009 at 2:07 PM
“ကျွန်မ ရဲ့လွတ်လပ်မှုက ကျွန်မ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပဲလေ၊ မောင်လာပေးနေဖို့မှမလိုတာ”
ဒါပေမယ့် ၁ယောက်တည်း ဘ၀ကနေ ၂ယောက် ပေါင်းစပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ထင်ရာကိုယ်စိုင်းလို့ ဘယ်ရပါ့မလဲနော်...
(အိမ်ရောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး မန့်မလို့ဟာ.. လူဇိုး.. )
"တခုပဲလေ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်မတော်တဆ ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ ကြတာပါ။"
tune March 19, 2009 at 7:03 PM
သီဟသစ် March 19, 2009 at 7:36 PM
မျိုးကြီးသီချင်းဆိုသွားသည်။ (ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင်)
It's base on feeling???
I really like all the words , u used for ma taw ta saachit.
Anonymous March 19, 2009 at 10:02 PM
တီချမ်း.......အေးအေးလေးနဲ့ ..ရိုးရိုးလေး ...Post လေးက..
အတွင်းစိတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရာတဲ့လား တီချမ်းရယ်။ မှန်လွန်းနေပြန်တယ်။
:)....ရေးထားတဲ့ ပုံလေး အရမ်းလှတယ် တီတီချမ်း ..:)
mgnge March 19, 2009 at 10:08 PM
ကောင်းပါ အတွေး လေး ကတော့
ဒီတစ်ခါပဲ ... တီ အတည်ရေးတွာေတွ့ သေး
မိုးခါး March 20, 2009 at 8:40 AM
အရမ်းမိုက်တာပဲ ...... အရမ်းကြိုက်တယ်း)
မမသီရိ March 20, 2009 at 8:57 AM
ဖိုးဂျယ် March 20, 2009 at 2:42 PM
Rita March 30, 2009 at 11:57 AM
ဟားဟား ထိတယ်။ ပေးဖတ်လိုက်ဦးမယ်။